Banyere Obeer - Shandong OBeer Machinery Equipment Co., Ltd.
Anyị Vision ： Iji bụrụ gị-eguzosi ike n'ihe nka biya omume.
Shandong OBeer Machinery Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa ihe biya biya. The ụlọ ọrụ integrates imewe, R & D, mmepụta, ahịa, echichi na nyere, na-agba mbọ na-a mbụ na klas soplaya. Ulo mmeputa bu: micro brewer, systembrew system, brewer biya na ebe ahia ahia, winery equipment and support equipment.
Obeer Company nwere ọkachamara oru nnyocha na mmepe otu, ikenyeneke mbiet mmepụta technology, elu mmepụta ngwá, na a zuru okè mgbe-sales ọrụ usoro; Site n'ịmụ usoro ọrụ biya dị iche iche na ụwa yana imepụta akụrụngwa biya maka ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Anyị na-abụghị nanị na-achụ mma mma nke ngwaahịa, ma ndị ọzọ nchegbu guzosie ike nke enterprise omenala na ọrụ usoro, ewepụtara mwube nke enterprise image na ika, na-eso na-emepe emepe echiche nke emebe iche iche, mmepụta Standardization na management di iche iche, anyị ụlọ ọrụ ozi na-emepụta uru maka ndị ahịa, rube isi na-akwụ ukwuu anya ka àgwà nke ngwaahịa, Anyị na-agbalịsi ike inye ndị kasị mma ngwaahịa na kasị mma ọrụ maka ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ.
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala na 2016, anyị enyela ihe ọ beerụ beerụ biya na-ebupụ nke ọma karịa mba 60 na mpaghara gụnyere Germany, Russia, Belgium, United States, Canada, Australia, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, South Korea, Argentina, Brazil, Singapore na mpaghara ndị ọzọ na mba. N'ihi na nke anyị magburu onwe ngwaahịa mma na mgbe-sales ọrụ, ọ na-ghọtara na otuto site ahịa!
Ọfụma, Oru oma, Nchekwa ike, yana Ego, anyị bụ onye mmekọ nsogbu ụwa maka biya biya!